Kawagoe, Edo dị nso na Tokyo | Akụkọ Njem
Kawagoe, Little Edo dị nso na Tokyo
Mgbe ụfọdụ anyị achọghị ịda ugboro ugboro n'otu ebe ndị njem nleta ma ọ bụ ndị kachasị ewu ewu. Tokyo bu nnukwu obodo sitekwa n’enyemaka nke ụgbọ oloko ndị Japan ọ dị mfe na ngwa ngwa iji pụọ ntakịrị na ya wee hụ ebe ndị mara mma nke ahụ zoro ezigbo nso.
kawagoe Ọ bụ otu n’ime ha. Bọmbụ nke Agha Worldwa nke Abụọ bibiri ihe ka ukwuu na Japan oge ochie, mana Great Kanto Earthquake nke 1923 emeworị ihe ọ bụla na mbụ, yabụ na ị ga-agatụ ntakịrị site na isi obodo iji malite ịtụgharị uche na iche n'echiche kedụ ka Japan si mee ọtụtụ narị afọ gara aga. Eziokwu bụ na Kawagoe meghere windo mara mma na n'oge gara aga.
1 Obere Edo
2 Otu esi aga Kawagoe
3 Ihe ị ga-ahụ na Kawagoe
Edo bụ aha ochie nke Tokyo Yabụ, kedu Kawagoe dị ka nke ochie Japan isi obodo dị ka a maara ya site na aha mara mma ma "na-adọta ndị njem nleta." Oge Edo kwekọrọ na nke ikpeazụ, Tokugawa, ya bụ, oge ikpeazụ nke shoguns ma ọ bụ nnukwu ndị isi na-achịkwa ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ahụ karịa eze ukwu.
Oge Edo biri na 1868 site na mmanye mepere ahia mba ofesi. Ọ bụrụ na ị hụrụ fim ahụ Ikpeazụ Samurai na Tom Cruise nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. N'ime narị afọ ndị a, site na nke iri na asaa na nke iri na itoolu, obi nke mba ahụ bụ Kawagoe Castle, ọ bụ ezie na obodo ahụ n'onwe ya na nke oge a, malitere site na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu.
kawagoe dị na Saitama, Kanto mpaghara, osimiri abụọ gafere ya ọ dị ihe dị ka kilomita iri atọ site na Tokyo. N'ụzọ dị mma, bọmbụ ndị a jikọtara emebiri emebi nke ukwuu ma taa ịga n'okporo ámá nke obodo ochie ahụ bụ ihe obi ụtọ.
Otu esi aga Kawagoe
30 kilomita abụghị ihe ọ bụla ma ị na-eme ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu awa n'iji ụgbọ oloko. E nwere ụzọ ụgbọ okporo ígwè atọ, mmadụ abụọ na otu ọha na eze, nke jikọtara Tokyo na Kawagoe ya mere na Japan Rail Pass ị na-aga n'efu. Ga-agarịrị Shinjuku Station na Yamanote Line wee were JR Saikyo ebe ahụ, ọrụ ọsọ ọsọ na-agakarị. Na-enweghị JRP ị kwụrụ 760 yen otu ụzọ. Ọ bụrụ na ịhọrọ ahịrị Seibu ị na-ahapụ Shinjuku mana ọ bụrụ na ị were Tobu ụgbọ oloko ahụ pụọ na Ikebukuro.
JR na Tobu ụgbọ oloko na-adapụ gị na Kawagoe Station, Tobu na Shin-Kawagoe. Site na ọdụ Kawagoe ọ kacha mma iji ụgbọ ala gaa Hon Kawagoe ebe ọ bụ na ebe ndị njem nleta dị nso na ọdụ ụgbọ elu a. Bọs ndị ahụ, agbanyeghị, na-aga oge niile. Busgbọ ala ndị Japan dị obere ma na nke a, ebe ọ bụ na obodo a na-eme njem nleta, ị nwere abụọ na-aga:
ụgbọ ala Tobu Koedo: na-emetụ isi ebe niile dị mkpa ma na-enye gị ụbọchị ngafe maka 300 yen. N'ụbọchị izu ọ bụla, ọ na-aga minit 50 ọ bụla na 15 ọ bụla ma ọ bụ 30 na ngwụsị izu.
Co-Edo Loop Bus: Nke a bụ ụgbọ ala ochie na-enweghị njedebe ụbọchị 500 yen. Ọ na-adịkarị na njem na enweghị ngafe na-efu naanị yen 200.
Ihe ị ga-ahụ na Kawagoe
Ọ bụ ihe dị mkpa mara ntakịrị ihe Tokyo ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ dị na Japan kwesịrị ịdị ka ọtụtụ narị afọ gara aga. Ọ bụ ezie na mpaghara nke ọdụ ụgbọ oloko ahụ bụ nke oge a, o zuola ịmalite ịmalite ịga ije iji hụ etu ọdịda obodo mepere emepe si agbanwe na obere ụlọ, nke ejiri osisi, nke nwere isi awọ na ikuku ochie na-amalite ịpụta.
E nwere isi n'okporo ámá na ị na-ejegharị si na njedebe ruo na njedebe. N'akụkụ abụọ enwere ụlọ Kurazukuri, nke nwere mgbidi ụrọ (ọkụ ọkụ), na ikuku nke ụlọ nkwakọba ihe ochie, taa gbanwere ụlọ ahịa ihe ncheta, ụlọ nri na ụlọ ahịa. Ọ na-erute ọtụtụ narị mita na alleys emeghe site n’oge ruo n’oge ebe ị na-ahụ kafe, ọtụtụ ụlọ ahịa na knickknacks. Ọ bụghị n'okporo ámá na-agafe agafe, n'eziokwu bọs na-agafe, mana ọ ka mara mma.
Ije ije ị ga-abanye n'ime ya Bell Tower ma ọ bụ Toki no Kane, akara nke obodo. Ọ na-ada ụda ugboro anọ n'ụbọchị, na elekere isii nke ụtụtụ, 6, 12 na 3 nke mgbede. Ọ bụ ezie na ọ dịla ochie, iwu ụlọ ugbu a sitere na 6. E nwere uzo warawara mara dị ka swiiti uzo ma obu Kashiya Yokocho, saịtị na-ere swiit ndị Japan. Na-amasị ha? Ọ bụghị m, nke siri ike, mana ndị mmadụ na-arahụ maka ha ma ọ dị ka ọ bụ na gburugburu ebe a ọpụrụiche bụ poteto ụtọ. Enwere ice cream cream, kọfị, beers, na ọbụna ihe ọ drinksụ otherụ ndị ọzọ.
Iji nweta ebe a, ị ga-ejegharịrị ihe dị ka nkeji iri abụọ site na ọdụ Hon Kawagoe ebe ọ dị nso na Kawagoe Festival Museum. Ememme a na-ewu ewu nwere ihe karịrị narị afọ atọ ma na-eme ya na ngwụsị izu nke atọ nke Ọktoba na ụgbọ mmiri mara mma ma dị oke ogologo na-agafe n'okporo ámá.
Anyị kwurịtara banyere Castle Kawagoe tupu mgbe ahụ, mana ọ ka dị? Mba, dị mwute. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nnukwu ụlọ ndị Japan mgbe ochie agbasaghị ala ọma jijiji na bọmbụ. Nnọọ ole na ole dị na mbụ ma ndị ọzọ bụ nwughari. N'ihe banyere Kawagoe enweghi otu ihe ma obu ihe ozo. E nwere mkpọmkpọ ebe na otu ụlọ na-abụbu ebe obibi nke ndị isi ọrụ.
A na-akpọ ụlọ ahụ Honmaru goten ma eweghachiri ya na nso nso a. Emeghere ya ọha na eze kemgbe 2011 ma enwere ọnụ ụlọ tatami, ogige mara mma na nwughari nke ndụ nwa eze na ụmụ bebi. Na-abanye na ọnụ ụzọ ya bụ 100 yen. Emechiri na Mọnde.
N'ikpeazụ, anyị agaghị anọ na Japan ma ọ bụrụ na enweghị ụlọ nsọ, ọ dị mma? Ihe Ainlọ Kitain Ọ bụ nnukwu ụlọ nsọ nke otu okpukpe Tendai Buddhist na mpaghara ahụ wee laghachi na narị afọ nke 1923 n'agbanyeghị na ọkụ gbara ya ọkụ na XNUMXth narị afọ. Ọkụ ahụ dị oke mkpa n'oge ahụ, yabụ na-agba egbe na-ebufere ụfọdụ ụlọ eze site na Edo ruo Kawagoe na ọ bụ ya mere na ị hụrụ ha ebe a. Ha aghọwo naanị ihe fọdụrụ na Edo Castle, ochie Tokyo bibiri site na ala ọma jijiji XNUMX na bọmbụ ndị ejikọtara ọnụ.
Kawagoe bụ ọmarịcha njem ụbọchị. Can nwere ike iri nri ehihie, jee ije, kpagharịa, ịzụ ahịa (enwere ụlọ ahịa nke Studio Ghibli a ma ama na ọtụtụ ụlọ ahịa ochie), wee laghachi n'ehihie. Ọ bụrụ n’ịga Japan n’oge oyi, ana m akwado ka ị bido n’isi ụtụtụ n’ihi n ’elekere ise nke ehihie ka ọ bụ n’abalị, ee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Kawagoe, Little Edo dị nso na Tokyo
Ihe kpatara ị ga - eji gaa Canary Islands
Ebe 10 kachasị mma n'ụwa dị ka Lonely Planet